वास्तवमा अनुपम के हुन् केटा कि केटी ? के भन्छन् उनका बुवा–आमा ?,विहेका लागि यस्तो छ उनको रोजाई (भिडियो) – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentवास्तवमा अनुपम के हुन् केटा कि केटी ? के भन्छन् उनका बुवा–आमा ?,विहेका लागि यस्तो छ उनको रोजाई (भिडियो)
हट्टी नट्टी कलाकार अनुपम श्रेष्ठ छोरा की छोरी भन्नेबारेमा अनुपमका बाबु आमाले मुख खोलेका छन् । अनुपमकी आमाले पहिलोपटक अनुपमले फ्रक लगाउरु लिपिष्टक लगाएको देखेपछि अनुपममा केटीको स्वाभाव देखिएको बताईन् । उनले अनुपम आफ्नो छोरा पनि र छोरी पनि भएको बताईन् । उनका बाबुले पनि अनुपमबाट आफूहरु निकै खुशी भएको भन्दै उनैको खुशीमा आफूहरु पनि खुशी हुने बताए । अनुपमको जन्मदिनको अवसर पारेर गरिएको बर्थडे कार्यक्रममा उनका बुवा आमाले अनुपमकोबारेमा खुलेर कुराकानी समेत गरे । उनीहरुले अनुपमको विवाहकोबारेमा समेत चासो राखेका थिए ।
अनुपमका अनुसार उनले केटीको स्वाभाव देखाउन थालेपछि उनकी आमाले लिङ्ग परिवर्तन गर्न समेत सल्लाह दिएकी थिईन् । अनुपमले विहे गर्ने समेत सोंच बनाएका छन् । उनले आफूलाई बुझ्ने तथा आफ्ना बाबा ममिलाई सम्मान गर्नेहरुसँग आफू विहे गर्ने बिचारमा रहेको समेत खुलाए ।